10 Events Special indrindra any Holandy | Save A Train
Home > Travel Europe > 10 Events Special indrindra any Holandy
(Last Nohavaozina: 18/06/2021)
Raha vao nifindra tany Pays-Bas ianao na mieritreritra ny hitsambikina amin'ny lamasinina hitsidika andro vitsivitsy, ianao angamba manontany tena hoe inona ny 10 Events Special indrindra any Holandy dia. Ho faly ianao ho fantatrareo fa misy betsaka ny manantena ny, na inona na inona fotoana taona izay vangianao.
Ary koa ny lava Pop fety, misy tsy manam-paharoa Special zava-nitranga tany Holandy fa tsy hahita na aiza na aiza-kafa: fankalazana mifandraika amin'ny Anarana iombonana fitondram-panjaka, Windmills, ary tulips. Ireo zava-mitranga mahafinaritra ireo fomba rehetra mba mifalia sy atao naroboka tao amin'ny Holandey fomba fanaovan-javatra!
Special Events any Holandy 1: New Taona Day mitsoraka (Nieuwjaarsduik)
Izany no iray amin'ireo zava-nitranga manokana any Holandy izay tsy ho an'ny reraka fo! Raha te-hanomboka ny taona vaovao, maka nangatsiaka manao antsitrika manaraka nalaina tao amin'ny New taona Day (Taom-baovao Day). Zavatra fety io dia nanomboka iray milomano Club ao 1960. Misy 209 Manitrika toerana any Holandy azonao atao ny manao antsitrika. Na dia, mitsoraka anaty ny Ranomasina Avaratra ao Scheveningen, The Hague, no toerana malaza indrindra amin'ny niakatra ho any 60,000 olona. Ary rehefa afaka izany, mampangovitra mpilomano dia aseho amin'ny kapoaky ny erwtensoep, ny lasopy mafana meaty pea.
Special Events any Holandy 2: taom-baovao Sinoa
Fantatrao ve fa ny Holandy manana ny iray amin'ireo vondrom-piarahamonina Shinoa lehibe indrindra any Eoropa? Mihevitra isika fa hoe dia tena mendrika ny toerana ambony eo amin'ny 10 Manokana ny ankamaroan'ny zava-nitranga tany Holandy! Ankamaroan'ny izy ireo mipetraka any Amsterdam, Rotterdam, ary The Hague, fa amin'izany dia misy isan-karazany ny zava-nitranga ny fankalazana ny Taom-baovao Sinoa. in Amsterdam, loha tsy mahazo manao Dam Square sy ny Nieuwmarkt / Zeedijk hahita dragona matso, liona dihy, ary ny afomanga. Azonao atao ihany koa ny manatrika ny asa manokana ao amin'ny De Bijenkorf trano fivarotana, anisan'izany ny calligraphy atrikasa, fampisehoana mozika, sy lanonana dite, na ao amin'ny Fo tempoly bodista Guang Shan Izy Hua.
Ny andro ihany koa momba ny sakafo, ary tany Amsterdam, dia afaka hihinana sakafo matsiro amin'ny tsena an-dalambe, tao amin'ny Ranomasina Palace (Europes voalohany mitsingevana trano fisakafoanana Shinoa), na any amin'ny iray amin'ireo maro trano fisakafoanana Shinoa manamorona ny Stormsteeg sy Geldersekade. Ao amin'ny Hague, dia hahita Shinoa fety ao amin'ny atrium ny lapan'ny tanàna sy ny tany manodidina Den Haags Chinatown Wagenstraat. Afaka mahita zava-nitranga in Rotterdam hitarika ho amin'ny Taom-baovao Shinoa, manandratra ny andro fankalazana manodidina Shinoa wijkpark Taloha West sy Westkruiskade Chinatown. Raha toa ianao ka finoanoam-poana, tamin'ny Taom-baovao Shinoa Eva hihinana ny trondro manta salady (Yu Sheng) hitondra soa vintana na Fai Hai, ny karazana ahidrano, for firoboroboana. Gong Xi Fa Cai! (Tratry ny taona!)
Bremen an'i Amsterdam Lamasinina
Hanovre ho any Amsterdam Lamasinina
Bielefeld ho any Amsterdam Lamasinina
Special Events any Holandy 3: Keukenhof (March To May)
The Keukenhof dia arguably ny zaridaina malaza indrindra any Holandy. Nibanjina in talanjona amin'ny an-tapitrisany maro miloko tulips mamelana Zavatra tsara tarehy ao amin'io valam-pirenena amin'ny teny tapaky ny volana Martsa ny May. The Keukenhof, izay midika dakozia zaridaina, no manodidina nanomboka tamin'ny taonjato faha-15 sy ny manarona whopping 32 hektara. Tato ho ato, ny Keukenhof mandray 800.000 mpitsidika isan-taona.
Ny iray amin'ireo Zava-nisongadina Tamin'ny 2018 foto-kevitra dia ny voninkazo goavana jiro Mosaic, nandrakotra ny faritra 250m2 sy ahitana ny 50.000 tulips, voaloboka hyacinths, ary crocuses. Inona no mitarika ny andiany manaraka?
Essen ho any Amsterdam Lamasinina
Dusseldorf ho any Amsterdam Lamasinina
Raha Events manokana any Holandy dia ahitana sakafo maimaim-poana, dia afaka samy manao ahy ao! amin'ny 50% eny, dia saika ho mangalatra! Tsidiho izao Anarana iombonana fety ho an'ny foodies, izay ahafahanao misakafo any amin'ny trano fisakafoanana ambony sasany any Holandy noho ny fihenam-bidy adala.
Trano fisakafoanana an-jatony mandray anjara amin'ny maro Anarana iombonana tanàna atero ho telo mahagaga Mazava ho azy fa ny sakafo sakafo ho an'ny tahan'ny manokana 28,50 euro. Michelin kintana trano fisakafoanana Mampianiana fanampiny saran'ny, sy ny trano fisakafoanana voatanisa eo an-tampon'ny 250 mitaky ihany koa ny fanampin kely. Na dia voafetra foodie miaraka amin'ny teti-bola, na liana hanandrana fotsiny ny sasany tsara dia tsara hafa fisakafoana fanaovana safidy tsy be loatra ny lavaka ao amin'ny kitapom-batsy, dia ho tia Restaurant Week. Ity tolotra manokana atao indroa isan-taona any Holandy.
Mba ho mora kokoa ny boky latabatra, ny mpikarakara ny hetsika dia nanao ny lisitry ny 500 trano fisakafoanana mandray anjara, isan-tanàna, amin'ny Restaurant Week namany Sary.
Aachen ho any Amsterdam Lamasinina
Koblenz ho any Amsterdam Lamasinina
Frankfurt ho any Amsterdam Lamasinina
5: Kings Day (Aprily 27)
Ny iray amin'ireo zava-nitranga manokana indrindra any Holandy, raha tsy iray amin'ireo tena mahafinaritra sy mikorontana, dia On Kings Day, Which dia mpanjaka Willem Alexander ny fitsingerenan'ny andro nahaterahana. Anarana iombonana tanàna hampiantrano antoko an-dalambe, parasy tsena, sy ny fiaraha-mientana, mamadika ny rehetra ny Holandy ho any amin'ny lehibe indrindra fetin'ny taona. Azonao antoka fa manampy izany ny iray amin'ireo indrindra manokana zava-nitranga tany Holandy! Lohan'ny avy ny olona hankalaza, milalao mozika, miakanjo volomboasary, ary manana soa tsara amin'ny lafiny rehetra, raha tsy izany mikorontana, fotoana. Kings alina dia ankalazaina ny alina talohan'ny Kings Day, miaraka amina fety tsy ara-dalàna ao amin'ny manintona ny ivon-tanàna vahoaka avy amin'ny kilometatra manodidina azy.
Osnabruck ho any Amsterdam Lamasinina
Lubeck ho any Amsterdam Lamasinina
Bremerhaven ho any Amsterdam Lamasinina
Kiel an'i Amsterdam Lamasinina
Special Events any Holandy 6: voninkazo
Efa nahita maso mitsingevana mirefy sivy metatra ve ianao, rakotra voninkazo sy gliding alalan'ny an-dalambe, Powered by na inona na inona, fa zavatra hafa? tsara, ianao efa! voninkazo Zundert no voninkazo lehibe indrindra eto amin'izao tontolo izao matso atao amin'ny mpiasa an-tsitrapo manontolo. Isan-taona isan-Hamlet miezaka ny hanao ny tsara tarehy indrindra float dia mbola nanao. Tsidiho ny tena manokana izany zava-nitranga in Zundert araka izay ho manafotra. Corso Zundert dia rehetra momba ny nahitany sy ny, amin 'izany, finoana!
Kassel ho any Amsterdam Lamasinina
Mannheim ho any Amsterdam Lamasinina
Fulda ho any Amsterdam Lamasinina
Heidelberg ho any Amsterdam Lamasinina
Special Events any Holandy 7: Relief ny Leyde (Relief Of Leyde)
The 10 Manokana ny ankamaroan'ny zava-nitranga tany Holandy tokony ahitana fomban-drazana, mazava ho azy. Ny zava-nitranga ny Leyde dia iray tamin'izy ireo! Ny fahatsiarovana ny Espaniola fahirano sy manaraka fanamaivanana ny tanàna 1574. Leiden lasa fety lehibe iray mandritra ny roa andro misesy. Ankafizo ny matso, fahafinaretana ara-drariny, tsena, fampisehoana, antoko, afomanga, sy ny nentim-paharazana vilia.
Na eo aza ny funfair sy ny fety marobe, Leidens Ontzet dia fankalazana amin'ny fomba amam-panao maro amin'ny dikany ara-tantara. Ny marainan'ny telo Oktobra dia manomboka amin'ny reveille tao amin'ny lapan'ny tanàna. Free Herring sy ny mofo fotsy ireo dia nomena teo am- Leiden Waag. Afaka mankafy ny mozika dia fivoriana ao amin'ny Van Der Werf zaridainam-panjakana sy ny asa fanompoana ao amin'ny Pieterskerk. Tamin'ny hariva fanaon'ny olona mihinana ny karaoty sy ny onion hanina antsoina hoe Hutspot. Ny fety lehibe mifarana amin'ny fampisehoana firework.
Trier an'i Amsterdam Lamasinina
Ghent ho any Amsterdam Lamasinina
Special Events any Holandy 8: sambo Amsterdam
SAIL dia manomboka amin'ny Parade: Sambo an-jatony no mankeny amin'ny IJ ary mamorona fahitana tsy manam-paharoa izay tsy hohadinoinao. Tamin'ny andro manaraka, lalao maro eo amin'ny rano hatao, anisan'izany ny Skutsjesilen(miara-sambo iray mampiavaka Frisian). Ny Royal Dutch Navy dia hampiseho ny fahaizany amin'ny rano ihany koa.
Ary manarakaraka io ny asa rehetra eny ambonin'ny rano, misy koa be atao eo amin'ny wharves, izay mahatonga izany dia manokana. Mirehareha ny lay fandaharana fialam-boly, kanto, kolontsaina, mozika, sy ny fanatanjahan-tena ary ny asa ny ankizy.
Niondrana an-tsambo Amsterdam miantoka ny manaitra sy tsy manan-tsahala avo andian-tsambo, mandeha sambo lova asa tanana, maoderina sambo, tafika an-dranomasina sambo, ary be mitovy.
Liege an'i Amsterdam Lamasinina
Leuven ho any Amsterdam Lamasinina
Bruges any Amsterdam Lamasinina
Oostende an'i Amsterdam Lamasinina
Special Events any Holandy 9: dia nanorina lay Days
Special campsites, takatry ny lasy, ary nitoby any anaty ala dia azo atao any Holandy nandritra ny dia nanorina lay Andro (Avy amin'ny trano-lay). Ny fandaminana ny dia nanorina lay Andro maro miara-miasa amin'ny mpiara-miasa. Izany hoe; filasiana Sites, ny Fikambanana ho an'ny fiarovana ny voajanahary Monuments any Holandy, ary koa ny Ala Commission. Ianao no nomena ny fahafahana toby tamin'ny tena mahaliana, levitra, ary toerana an'ala an'ny Noordoostpolder. Ihany koa ho an'ny olon-dehibe mahafinaritra Super sy ny ankizy mitovy!
Genk ho any Amsterdam Lamasinina
Hasselt ho any Amsterdam Lamasinina
Namur ho any Amsterdam Lamasinina
Kortrijk ho any Amsterdam Lamasinina
Special Events any Holandy 10: Parkpop
Parkpop dia iray amin'ireo zava-nitranga lehibe indrindra Pop any Holandy, natao isan-taona eo amin'ny farany Alahady Jona. Inona no mahatonga izany aza manokana, dia fa tanteraka maimaim-poana!
Ny hetsika tsy tapaka hatramin'ny 1981, Pop firenena ity fety efa nanisy The Hague on the map. Noho ny fety mozika maimaim-poana amin'ny ambaratonga lehibe. Nandritra ny taona maro, izany maimaim-poana na dia ny lehibe indrindra amin'ny fetin'ny mozika Pop rehetra Eoropa! Afaka manantena ny 350.000 olona mahatahotra ity fety.
Raha toa ianao ka avy amin'ny faritra hafa ao La Haye, dia hevitra lehibe ny bisikileta ho any amin'ny toerana ao amin'ny Zuiderpark.
Efa atao hoe ny 10 Manokana ny ankamaroan'ny zava-nitranga tany Holandy, fa misy maro hafa. Get eo amin'ny fiaran-dalamby noho ny fanampian'ny Save A Train dia ho hitanao mihitsy!
Tianao ve mba hiraketana ny bilaogy lahatsoratra “10 Events Special indrindra any Holandy” tao amin'ny toerana? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome voninahitra fotsiny amin'ny rohy amin'ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fspecial-events-netherlands%2F%3Flang%3Dmg- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)